Alshabaab oo Diyaarisay, soona bandhigtay Manhajkeeda cusub ee Dugsiyada Dhexe (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo Diyaarisay, soona bandhigtay Manhajkeeda cusub ee Dugsiyada Dhexe (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab ayaa soo bandhigtay Manhajka Waxbarashada Dugsiyada Dhexe oo dhammeystiran, 4 sano kadib markii ay dhaqan gelisay Manhajka Dugsiyada Hoose oo hadda lagu dhigo degaanada ay ka taliso.
Xaflad oo ka dhacday degmada Saakoow ee gobolka Jubbada dhexe maalina hor, balse sawirradeeda maanta la shaaciyey ayaa lagu soo bandhigay Manhajka Alshabaab ee Dugsiga Dhexe, kaasoo uu diyaariyay xafiiska u qaabislan Tacliinta oo sheegay inuu diyaarin doono Manhajka Dugsiyada Sare.
Waxaa xafladda ka qeyb galay culimada Alshabaab iyo taageerayaashooda, waxaana buugaanta lasoo bandhigay ka mid ahaa: Tafsiirka, Xadiithka, Fiqhiga, Towxiidka, Carabiga qeybihiisa, Taariikhda, Joqraafiga, Sayniska, Xisaabta iyo luqadda Soomaaliga.
Alshabaab ayaa ka talisa degaano badan oo Koonfurta Soomaaliya, waxayna muddo dheer oo ay ku xididdeysatay ay keentay inay isu bedelaan maamul buuxiyey baahiyihii dowlad laga rabay. Sanakii 2017 ayey Alshabaab dhaqan gelisay Manhajka Dugsiyada Hoose.
Previous articleXafiiska Ra’iisal Wasaaraha oo shaaciyey Maamul Goboleedka ay u xayiran yihiin Guddiyada Doorashada
Next articleWasiirada Arrimaha Dibadda Somaliya iyo Kenya wadahadal diiran ku yeeshay Khadka Telefoonka